DOWNLOAD FPS NYOCHAA NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
FPS nyochaa 4400
Dị ka anyị si mara, a na-edekarị nọmba nọmba iwu na nọmba ndị Rom. Mgbe ụfọdụ, ọ dị ha mkpa iji ha rụọ ọrụ na Excel. Nsogbu bụ na na keyboard kọmputa kọlọtọ, ọnụọgụgụ dijitalụ nọchiri anya nanị site na nọmba Arabic. Ka anyị chọpụta otú e si dee nọmba ndị Rom na Excel.
Ihe omumu: Ide ederede Rom na Microsoft Word
Ụdị stampụ Rom
Nke mbụ, ị ga-achọpụta ihe ịchọrọ iji ọnụ ọgụgụ ndị Roman nye. Ọ ga-abụ otu ojiji ma ọ bụ mkpa iji mee mgbanwe dị ukwuu nke ụkpụrụ dị iche iche dị na nọmba Arabic. N'okwu mbụ, ihe ngwọta ga-adị nnọọ mfe, maka nke abụọ, ị ga-etinye usoro pụrụ iche. Tụkwasị na nke a, ọrụ ahụ ga-enyere aka ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị nke ọma na iwu maka ide edemede a.
Usoro 1: Bipute site na keyboard
Ọtụtụ ndị na-echefu na ọnụ ọgụgụ ndị Roman nwere mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụedemede Latin. N'aka nke ya, ihe odide nke mkpụrụedemede Latịn dị n'asụsụ Bekee. Ya mere ihe ngwọta kachasị mfe, ọ bụrụ na ị maara nke ọma na iwu maka ịde ederede a, ga-agbanye na nhazi keyboard. Ka ịgbanwee, pịa bọtịnụ kachasị Ctrl + Shift. Mgbe ahụ, anyị pịnye nọmba ndị Rom, na-edegharị mkpụrụedemede English okwu, nke bụ, na ọnọdụ ahụ "Mkpọchi mkpọchi" ma ọ bụ na igodo ahụ ejiri Mgbanwe.
Usoro 2: tinye agwa
E nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi tinye nọmba Rom ma ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ iji usoro a nke igosipụta nọmba. Enwere ike ime nke a site na windo akara akara.
Họrọ cell nke anyi na-eme atụmatụ itinye akara. Ịbụ na taabụ "Tinye", pịa bọtịnụ na rịbọn "Akara"dị na ngọngọ ngwaọrụ "Ihe Atụ".
Na-amalite ihe odide ntọala. Ịbụ na taabụ "Ihe Atụ", họrọ ụdị edemede ọ bụla (Arial, Calibri, Verdana, Times New Roman ma ọ bụ ndị ọzọ), n'ọhịa "Nịm" họrọ ọnọdụ site na ndepụta ndepụta "Latin Latin". Na-esote, jiri aka ya pịa akara nke anyị chọrọ nọmba ọnụ ọgụgụ Rom. Mgbe ọ bụla pịa akara ngosi pịa bọtịnụ Tapawa. Mgbe ntinye ihe edere edere, pịa bọtịnụ nso nke akara ngosi ahụ n'akụkụ aka nri.
Mgbe usoro a gasịrị, ọnụ ọgụgụ ndị Rom ga-apụta n'ime sel nke onye ọrụ ahụ họpụtara.
Ma, n'ezie, usoro a dị mgbagwoju anya karịa nke gara aga ma enwere ike iji ya nanị mgbe maka ụfọdụ ihe kpatara keyboard adịghị ejikọ ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ.
Usoro 3: jiri ọrụ ahụ
Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịpụta nọmba ndị Rom na akwụkwọ Excel site na ọrụ pụrụ iche, nke a na-akpọ "ROMAN". Usoro a nwere ike ịbanye ma site na windo arụmụka arụmụka na njikwa ihe osise na ederede aka na cell, ebe ọ ga-egosipụta ụkpụrụ, na-esote usoro okwu a:
= ROM (nọmba; [ụdị])
Kama nke oke "Ọnụ ọgụgụ" ịkwesịrị iji ọnụ ọgụgụ egosipụtara na nọmba Arabic, nke ịchọrọ ịsụgharị n'ime akwụkwọ Roman. Ogologo "Ụdị" abụghị nkwupụta achọrọ ma gosipụta naanị ụdị ederede.
N'agbanyeghị nke ahụ, maka ọtụtụ ndị ọrụ, iji usoro ka mfe itinye. Ọkacha Ọrụkarịa ịbanye aka.
Họrọ sel nke ga - emecha gosipụta. Pịa bọtịnụ "Tinye ọrụ"tinye n'aka ekpe nke usoro mmanya.
Window arụ ọrụ Ndị isi ọrụ. Na ụdị "Ndepụta ndepụta nke mkpụrụ akwụkwọ" ma ọ bụ "Mgbakọ na mwepụ" achọ ihe "ROMAN". Họrọ ya wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK" na ala nke windo ahụ.
Mkparịta ụka ahụ meghere. Nanị arụmụka achọrọ "Ọnụ ọgụgụ". Ya mere, anyi na ede ede Arabic nke anyi choro n'ubi otu aha. I nwekwara ike iji ntinye ederede nke nọmba a dị ka arụmụka. A na-akpọ esemokwu nke abụọ "Ụdị" achọrọghị. Mgbe data batara, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọnụ ọgụgụ dị na ndekọ ndekọ ahụ anyị chọrọ ka egosiri na cell na-ahọrọ.
Usoro a kachasị adaba n'ọnọdụ ndị ahụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị kpọmkwem mkpụrụ edemede nke nọmba dị na nsụgharị Rom. N'okwu a, ọ na-edekọ ya na nọmba Arabic, usoro ahụ n'onwe ya sụgharịrị ha n'ime ụdị ngosi a chọrọ.
Ihe omumu: Ọrụ Math na Excel
Nzọụkwụ 4: Nkọgharị Mass
Ma ọ dị mwute ikwu na n'agbanyeghị na eziokwu ahụ bụ ọrụ ahụ ROMAN na-ezo aka n'ìgwè nke ndị na-arụ ọrụ mgbakọ na mwepụ, iji mee ka nyocha na ọnụ ọgụgụ ndị e tinyere na enyemaka ya, nakwa dịka ụzọ ndị dị n'elu, agaghị ekwe omume. Ya mere, maka otu iwebata otu nọmba, iji ọrụ ahụ adịghị adaba. Ọ dị nnọọ ngwa ngwa ma dị mfe ịpị nọmba achọrọ na nsụgharị Rom nke ide ihe na keyboard site na iji ntụgharị asụsụ Bekee. Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị otu kọlụm ma ọ bụ kọlụm nke ejiri nọmba Arabic mee ihe n'ime ederede ederede, mgbe ahụ na nke a, ngwa nke usoro ahụ ga-eme ngwa ngwa.
Anyị na-eme mgbanwe nke uru mbụ na kọlụm ma ọ bụ n'usoro sitere na Arabic na-ede ederede nke Roman site na ntinye akwụkwọ nke ọrụ RIMAN maọbụ Ndị isi ọrụdị ka akọwapụtara n'elu. Dị ka arụrịta ụka, anyị na-eji ntụpọ sel, ọ bụghị nọmba.
Mgbe ị gbanwegharịrị ọnụ ọgụgụ, setịpụ cursor na akụkụ aka nri ala nke usoro cell. A na-atụgharị ya na ihe mmewere n'ụdị obe, nke a na - akpọ akara akara. Kpatụ bọtịnụ òké aka ekpe ma dọrọ ya na ntanetị nke mkpụrụ ndụ ndị Arabic.
Dị ka ị na-ahụ, a na-edepụta usoro ahụ n'ime mkpụrụ ndụ, na ụkpụrụ ndị dị n'ime ha na-egosipụta n'ụdị nọmba ndị Rom.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi dee nọmba nke Rom na Excel, nke kachasị mfe bụ nọmba nke nọmba na keyboard na nhazi asụsụ Bekee. Mgbe ị na-eji ọrụ RIMSKY, ọ dịghị ọbụna mkpa maka onye ọrụ ịmara iwu nke nọmba a, ebe ọ bụ na usoro ihe omume ahụ n'onwe ya na-eme atụmatụ niile. Ma, ọ dị mwute ikwu na ọ dịghị ụzọ ọ bụla a maara nke ọma ugbu a na-enye ohere maka ịme usoro mgbakọ na mwepụ n'usoro ihe omume ahụ site na iji ụdị nọmba a.